Vonona amin'ny fandraisana marary ny Centre de Traitement Covid-19 Mahamasina | Primature
Vonona amin’ny fandraisana marary ny Centre de Traitement Covid-19 Mahamasina
Lapan’i Mahazoarivo, ny 30 martsa 2021- Ho fanamafisana ny ezaka atao amin’ny fifehezana ny fipariakan’ny valanaretina covid-19 dia nisokatra androany ny ivon-toerana fitsaboana an’ireo izay mitondra ny otrikaretina, na ny « Centre de Traitement Covid-19 »(CTC), ao amin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahasina.
Tonga nitsidika ny ivon-toerana ny Praiminisitra Ntsay Chrisitian, nijery ny fahavonona ara-teknika amin’ny fandraisana marary. Ny ministeran’ny Fiarovam-pirenena no mitantana ity CTC ity ka nitari-dalana tamin’ny fitsidihana ny Sekretera Jeneralin’ny ministera, ary marihina fa mpitsabo miaramila avokoa no tompon’andraikitra mivantana ao amin’ny ivon-toerana.
Nohazavain’ny Praiminisitra fa tsy maintsy ampitomboina ny fahafahana mandray marary iharan’ny covid-19, ary nanome toromarika hanokafana CTC roa ny Filohan’ny Repoblika, dia ny any Ivato sy eto Mahamasina izany, ary ezahina ny hanome izay fitsaboana tena ilain’ny marary amin’ireo ivon-toerana ireo. « Iarahantsika mahalala fa mifarimbona amin’ny fandraisana an-tanana ny marary ny ao amin’ny governemanta manontolo, ary ny ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka no mandrindra ny asa rehetra atao amin’ny ady amin’ny covid-19, tsy eto Antananarivo ihany fa manerana ny Faritra rehetra », hoy ny tenany.
Manoloana ny fihanaky ny valanaretina eran-tany ankehitriny, dia nambaran’ny Praiminisitra fa miatrika sy misedra an’izany ao anatin’ny firaisan-tsaina isika Malagasy, ary nomarihiny fa ny fandraisana an-tanana an’izao ady amin’ny covid-19 izao dia misandrahaka amin’ny fanatanterahana ny adidy ho an’ny olona tsirairay. Maro hoy izy ny fepetra efa noraisina amin’ny fitandremana, ary notsiahiviny ny tokony hanajàna ireo fepetra sakana (geste barrière) eny anivon’ny fitateram-bahoaka, satria fantatra fa mety hampitombo ny tranga covid-19 ny tsy fanjàna an’izany. Teo no nanaovany antso avo ho an’ny vahoaka Malagasy, ny amin’ny handraisan’ny tsirairay andraikitra hampihatra ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra teo aloha, ary hanatona toeram-pitsaboana avy hatrany raha vao misy tranga mampiahiahy, satria tsapa fa mbola be ny olona tsy tonga saina amin’izany. Izany indrindra koa dia mba tsy hahatongavan’ny fitondram-panjakana amin’ny fandraisana fepetra hafa, toy ny famerenena ny fihibohana, ho fitsinjovana ny fahafahan’ny vahoaka Malagasy miaina malalaka ny fiainana andavanandro.
Nampahafantarin’ny Praminisitra fa efa mijery akaiky an’ireo toby fitsaboana ny fitondram-panjakana, mba hananan’izy ireo mpitsabo, fanafody, ary mpitsabo mpanampy ara-dalàna, ka hojerena ihany koa ny hahafahan’izy ireo mitily ny aretina rehetra. Nomarihiny fa maro amin’ireo hopitaly eto an-toerana no manana milina mamokatra « oxygène », nefa mbola misy ny tsy fahampian’izany eo amin’ny fitsaboana. Izay no iarahana miasa amin’ny orinasa mpamokatra sy mpivarotra « oxygène », ary entanina izy ireo amin’ny fandaminana ny fomba fiasany mba hamokarany be kokoa araka izay filàna eny anivon’ny toeram-pitsaboana.
Teo am-pamaranana dia nisaotra ny mpiasan’ny fahasalamàna manontolo izay manao ny ain’izy ireo tsy ho zavatra amin’izao ady atao amin’ny covid-19 izao ny Praiminisitra, ary nomarihiny fa ho an’i Mahajanga manokana dia efa nampitomboina ny toerana fandraisana marary, sy ny fampitaovana mifandraika amin’izany.
← Fampirantiana nataon’ny fikambananan’ireo teratany Indiana
Fidinan’ny Praiminisitra tany Mahajanga →